Kedụ ka Ahịa Mgbasa Ahịa Na-ere Mgbasa? | Martech Zone
Site n'ikike nke ndị ọma nọ na eDigitalResearch na PortalTech, onye na - eweta azụmaahịa na - eduga na UK, anyị gosipụtara Whitepaper ha na - adịbeghị anya banyere etu ekwentị si emetụta azụmahịa azụmaahịa n'ime a Infographic Ahịa. Iji lee ozi ọgụgụ zuru oke, pịa na ya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji Infographic na saịtị gị, ị ga-eji koodu ndị a:
Budata Ọnọdụ na-agbanwe agbanwe na nchọgharị na ọtụtụ mmasị ịzụ ahịa . Infographic Ahịa siteDK New Media
Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-akpali akpali. Nyere ozi ọma na ndị na-ere ahịa na-amasị Oke ala na-emechi na Best Buy na-ada ya retail akara ukwu, M na na na ma ọ bụrụ na nke a bụ ozi ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ dị m ka nnukwu ụlọ ahịa ụdị ụlọ nkwakọba ihe dị oke ọnụ na-agba ọsọ, na-akpata okporo ụzọ, yana adịghị ike.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike iji ekwentị rụọ ọrụ nke ọma iji nyochaa mkpebi ịzụta - naanị gaa ma ọ bụrụ na anyị ga-achọ ịzụrụ ihe anyị zụtara - ọ bụghị nke ahụ dị mma maka mmadụ niile? Ekwenyesighi m ike na enwere mfu ọrụ nyere na a ga-etinye nkesa na ụlọ nkwakọba ihe ọzọ (nke na-anaghị enyere ike adịghị ike, echere m).